Malunga nathi -Cepai Group Co, Ltd.
Iziko le-HQ kunye ne-R & D leqela le-CEPAI likwiziko lezemali lase-China -Shanghai kunye nomzi-mveliso wethu obekwe eShanghai Songjiang Zone yoPhuhliso lwezoQoqosho kunye neJinhu yoPhuhliso lwezoQoqosho, kwisangqa sezoqoqosho saseYangtze River Delta.
Inkampani igubungela ummandla weemitha zesikwere ezingama-48000, kunye neemitha zesikwere ezingama-39000 kumasifundisane. Ngaphezulu kweminyaka elishumi yophuhliso olukhawulezileyo, iqela le-CEPAI limisele amasebe amahlanu, kubandakanya ne-Shanghai CEPAI Investment Management Co, Ltd.I-KIST Valve Co, Ltd. I-CEPAI Iqela leValve Co, Ltd I-CEPAI Iqela loXinzelelo isixhobo, Co kunye ne-CEPAI Iqela Elikhulu Ihotele Co., Ltd. Ngokocwangciso lwethu lwentengiso, Iqela leECPAI lizinikele ekwakheni intengiso yalo Inkonzo kunye nenkqubo yokuthengisa kwi-Intanethi ukusuka ekhaya nakwamanye amazwe ngokusekwe kwintengiso yethu esele ikho. Ukubamba “ukwakha amazwe ngamazwe ngobuchwephesha obukhokelayo kunye nenkonzo yeklasi yokuqala” njengethagethi yethu esokolayo, iqela lethu liyazibophelela ekwakheni umvelisi ogqwesileyo onamandla amakhulu efuthe kwizixhobo zolawulo, iivelufa, nakwimishini yoomatshini bepetroleum eyenza uphawu lwethu 'CEPAI' kunye nehlabathi ukhuphiswano.
Isikhundla kwangaphambi koqeqesho lwabasebenzi kunye netekhnoloji ye-R & D kunye nesicwangciso-qhinga sophuhliso ngumsebenzi omkhulu wobuvulindlela owenziwe ziinkokheli ze-CEPAI amashumi eminyaka, kwaye isicwangciso-qhinga sophuhliso lwe "teknoloji siphumelela ishishini siye saqinisekiswa ekuqaleni kwenkampani. Ukujongana nabakhuphiswano abomeleleyo kunye nentengiso eziya ziba mandundu, inkampani yethu iseke iziko lokucwangcisa ukuthengisa kunye neziko le-R & D eShanghai kwi90s. Okwangoku, iqela le-CEPAI lilawule iitekhnoloji ezininzi eziphambili kunye nezinye iinxalenye zobuchwephesha besizwe kunye neshanghai, kwaye benza iimveliso ezizodwa zeR & D. I-CEPAI inezinto ezihambelana nezixhobo zale mihla, ezinje ngeziko lokuqhubekeka, umatshini wokuhlola, isixhobo soomatshini be-CNC, ukugqabhuka kweplasma, igumbi lokuhlalutya lomzimba kunye neekhemikhali, ukuhambisa umgca wemveliso yevanishi, ukuhlanganisa ivelufa kunye nokufaka umgca wemveliso, ukuhlanganisa izixhobo kunye nokufaka umgca wemveliso, umasifundisane wonyango lobushushu , izixhobo zokuzicoca, uxinzelelo / umahluko wemveliso yokuhambisa uxinzelelo kunye nokunye. Ngeli xesha, iqela le-CEPAI liqhubeke nokunikezela ngamandla ezabasebenzi, izixhobo ezibonakalayo kunye nezemali ekudaleni nasekuphuculeni imveliso yepropathi kunye nomgangatho. Iqela le-CEPAI limisele ubudlelwane bokusebenzisana neYunivesithi yaseChongqing, iZiko laseShanghai lokuSebenzisa izixhobo, iYunivesithi yaseShanghai Jiao Tong, iYunivesithi yaseNanjing eseMpuma, iZiko lokuzenzekelayo laseShenyang, iShan Dong iziko loomatshini bepetroleum njl.njl. amashishini ahlukeneyo, anjenge-petroleum, imichiza, ishishini lokuvelisa izinto, intsimbi, amayeza, ukutya, impahla eyolukiweyo, imboni yezomlo, akucaci, ukwakha iinqanawa, ukuhamba ngenqwelomoya njl.
I-CEPAI ikhethekileyo kwi-R & D, ukwenziwa, ukuthengiswa kunye nenkonzo yekontrakthi ye-EPC yezixhobo ezahlukeneyo zoxinzelelo lweoyile kunye negesi, ukuxhwitha nokubulala iinkqubo, izivalo zamasango eeblukhwe, iivevhe zebhola ezinobubanzi obukhulu, jonga iivalves, iivalve zodaka, iiplavu zodaka, udaka -gas umahluli njl. Zonke iimveliso zenziwe ngokungqongqo ngumgangatho we-API-6A, API-6D, API-16C.CEPAI iyakwazi ukubonelela ngesisombululo sophuhliso kwithuba elifutshane. Abathengi abaninzi baqala ukusebenzisana ne-CEPAI ekusingatheni uphando malunga nophuhliso, bachukunyiswa yi-CEPAI ukuphendula ngokukhawuleza, ubuchule obunobutyebi kunye nenkonzo efudumeleyo, bayazi ukuba i-CEPAI liqabane abalifunayo, emva koko intsebenziswano yexesha elide iqala. I-CEPAI inomdla kwimfuno yakho kwaye ikulungele ukubonelela ngesisombululo esinye sokumisa esiya kudlula kulindelo lwakho
I-CEPAI isebenza neekhontraktha zokomba, abavelisi beoyile kunye negesi, abaqhubi bemibhobho, abacokisi kunye nabanye abanini beenkqubo zokulawula inkqubo ethe ngqo, yokulinganisa kunye nokucinezela uxinzelelo kunye nokuhamba. Ukulandela ngokungqongqo imigangatho ye-API (American Petroleum Institute) Iqela le-CEPAI lityale imali engaphezulu kwezigidi ezingama-50 zeedola ukuseka enye yeziseko zethu zemveliso ezenza ngokukodwa i-API 6A, i-API 6D, izixhobo ze-API 16C, izinto ezinxulumene noko.
Ngokudityaniswa koqoqosho lwehlabathi namhlanje, abantu beECPAI bayasokola ukwenza uphawu lwe "CEPAI". Ixesha elizayo i-CEPAI-- iya kunikezelwa kwizixhobo, ivelufa, kunye nomzi mveliso wepetroleum ngonaphakade. Ngaphezulu, iQela le-CEPAI lizinikele ekwakheni uphawu lwalo ngempembelelo yamanye amazwe kunye nokwenza igalelo kuluntu ngeenjongo zokuseka ubuchwephesha obuphambili bezizwe ngezizwe.
-Sijonge ngokuSebenza! -
Inkampani yiNkokeli yeSizwe iv, iZiko leMveliso eliTshintshayo elinenani labasebenzi abaSebenzayo abaPhezulu.
Iqela le-CEPAI linama-35000 eemitha zomatshini wokuqhuba umatshini wokusebenzela .Ukuze uhlangabezane neemfuno zokuvelisa i-valve nge-ON enkulu kunye nenqanaba eliphezulu, kukho i-lathes nkqo kwi-3.5 kunye ne-2 yemitha, i-lathes ethe tyaba kwi-1 .8, 1 .25 yemitha. ukuphucula ukusebenza ngokuchanekileyo kunye nokuhambelana kweendawo, kukho isixhobo esikhethekileyo somatshini we-CNC, kunye nendawo yokuqhubekeka kwindawo yokusebenzela, esetyenziselwa ukwenza imveliso ekufutshane yevalve ngokusetyenziswa okubalulekileyo kunye nolwakhiwo olunzima okanye kubathengi abaneemfuno ezizodwa.
Inkqubo yokuQhuba ngokuFanelekileyo, iNkqubo yokuQinisekiswa koMgangatho oGqibeleleyo, isiQinisekiso esiFanelekileyo esiQinisekisiweyo soNikezelo se-CEPAI. I-CEPAI inezinto zale mihla, ezinje ngeziko lokuqhubekeka, umatshini wokuhlola. Oomatshini be-CNC. Ukwanda kweplasma kwigumbi lokuhlalutya lomzimba kunye neekhemikhali, umgca wemveliso yevanishi, ukuhlangana kwevalve kunye nokufaka umgca wemveliso, ukudibanisa izixhobo kunye nokufaka umgca wemveliso, iindibano zocweyo zokunyanga ubushushu, izixhobo zokucoca. Uxinzelelo / umahluko wokuhambisa isixhobo sokuhambisa ubushushu, isixhobo sokuhamba kunye nomgangatho wokuveliswa kwesixhobo, Okwangoku, iqela le-CEPAI liqhubeke nokunikezela ngamandla ezabasebenzi, izixhobo ezibonakalayo kunye nezemali ekudaleni nasekuphuculeni imveliso yepropathi kunye nomgangatho.
Izixhobo zeHardware eziphambili zokuqinisekisa ukuba i-CEPAI inamandla ngakumbi kukhuphiswano lwemalike yevalve. I-CEPAI ikhokelela ekwaziseni ngezixhobo zemveliso eziphambili, ezinje ngamaziko machining e-CNC ukuphucula kunye nokuhlaziya izixhobo zehardware kwishishini elinye, eliqinisekisa inqanaba eliphambili leemveliso zethu.
Amandla oPhando noPhuhliso aXhasa iShishini ukuba liqhubeke nokufikelela kwiithagethi eziphezulu ngonaphakade.
I-CEPAI inayo iqela lophando kunye nophuhliso olunemfundo ephakamileyo, amandla aphezulu kunye nezakhono eziphezulu. Uphando lwevalvu yephondo kunye neZiko lophuhliso ikakhulu kubandakanya nabaphandi abaphezulu basebenza kuphando kunye nokuveliswa kwezivalo kunye nezinye iimveliso zobugcisa eziphezulu ezinamalungelo obunini obunini bokuqonda. Ngeli xesha i-CEPAI isebenzisana neyunivesithi edumileyo efana ne-Shanghai Automation Instrumentation Institute. IYunivesithi yaseShanghai Fudan, iYunivesithi yaseShanghai Jiao Tong, iYunivesithi yaseNanjing. IYunivesithi yaseJiangsu, iYunivesithi yaseNanjing yeAeronautics kunye neAstronautics (NUAA) njalo njalo ukuphuhlisa iimveliso eziphambili ngokubhekisele kulwamkelo lokuvuma phambili kunye nokwazisa ubuchwepheshe obuphambili.
Ukuze ube yimpumelelo esekwe kuphando lwenzululwazi nobuchwepheshe, ukuseka isiseko sophuhliso lweshishini kwixesha elizayo. I-CEPAI iyasindisa kwimizamo yokufikelela kwelona qondo liphezulu kwimbono yoyilo lobuchwephesha, itekhnoloji ekhutshiweyo, ukuphanda iitalente kunye nezixhobo.
Inkampani yiNkokeli yeSizwe kwiZiko leMveliso eFlexible elinenani labasebenzi abaSebenzayo abaPhezulu.
Iqela le-CEPAI linama-25000 eemitha zomatshini wokulungiselela umasifundisane .Ukuze uhlangane neemfuno zokuvelisa imveliso yevalve nge-ON enkulu kunye nenqanaba eliphezulu, kukho iindawo ezime nkqo kwi-3.5 kunye ne-2 yemitha, i-lathes ethe tyaba kwi-1 .8, 1 .25 yemitha. ukuphucula ukusebenza ngokuchanekileyo kunye nokuhambelana kweendawo, kukho isixhobo esikhethekileyo somatshini we-CNC, kunye nendawo yokuqhubekeka kwindawo yokusebenzela, esetyenziselwa ukwenza imveliso ekufutshane yevalve ngokusetyenziswa okubalulekileyo kunye nolwakhiwo olunzima okanye kubathengi abaneemfuno ezizodwa.
Uvavanyo olungqongqo luphunyezwe ngoKhetho lweZinto, ukuPhononongwa kweNdawo, iNdibano kunye nokuLungiswa kweParamende nganye yeeNdawo eziNgenisiweyo.
Inkampani ineendawo zokuhlola umgangatho kunye nokuvavanywa kwamayeza ngonyango lobushushu, uhlalutyo lweekhemikhali, uhlalutyo lwembonakalo, uhlalutyo lwensimbi, uhlalutyo lokusebenza ngomatshini, uvavanyo lwe-ray, uvavanyo lwe-ultrasonic, ukuvavanywa kwamasuntswana ombane, ukuvavanywa okuphakathi kunye nokukhulu kovavanyo lwevaluva njalo njalo.
Ngokusekwe ekumiselweni komgangatho bubomi beshishini kunye nodumo sisiseko seshishini, inkampani yethu iseka inkqubo yokuqinisekisa umgangatho wokuqhuba ikhosi yonke yolawulo lomgangatho kwiimveliso. yeyakho. Ukususela ekungeneni kwezinto ezingasetyenziswanga kunye nokukhutshelwa kwamalungu, ukulungiswa kwamalungu kumgangatho ophumayo wolawulo lwemveliso egqityiweyo, inkqubo yolawulo lwenethiwekhi yekhompyuter iyasetyenziswa kwaye iifayile zomgangatho wemveliso ziyasetyenziselwa ukuqonda ulawulo lokulandela imveliso. ngokugxininisa kumgaqo-nkqubo osemgangathweni wabathengi ojolise ekufumaneni isikhalazo esingafunekiyo sabathengi, ngokusekwe kwinkqubo yokufuna ukungaziboni iimveliso, sityhalela phambili iprojekthi eyonelisayo yomthengi ukuze anelise iimfuno zabathengi kwaye alindele.